विमानस्थलमा राखिएको हेलिकप्टरबाटै तेल चोरी! « Swadesh Nepal
विमानस्थल कार्यालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पार्किङमा राखिएका दुई कम्पनीका हेलिकप्टरबाट तेल चोरी भएको हो। विमानस्थलको अनुमति दिएका व्यक्तीमात्र जान पाउने उक्त क्षेत्रमै इन्धनको चोरी हुनु गम्भिर घटना भएको र यो सार्वजनिक नगर्न नेतृत्वले दवाव दिएको विमानस्थलका जुनियर अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार हालैमात्र दुई कम्पनीका हेलिकप्टरबाट ११ सय लिटर इन्धन चोरी भएको थियो। ‘पार्किङमा राखिएको प्रभु हेलिकप्टरबाट ७ सय लिटर इन्धन चोरी भएको छ। त्यस्तै हेली एभरेष्टको हेलिकप्टरबाट ४ सय लिटर चोरी भएको भन्ने गुनासो आएको छ। तर यसबारेमा सम्बन्धित कम्पनीलाई पनि बाहिर नलिन उर्दी जारी गरिएको छ’ विमानस्थलका एक कर्मचारीले भने।
‘विमानस्थलमै आज इन्धन चोरी भयो, भोलि पार्टसपुर्जा चोरी होलान् यसको रोकथाम कसरी गर्ने? यो गम्भिर विषय हो’ एक व्यवसायीले भने। चोरी भएको भन्दै व्यवसायीहरुले भने पनि त्यसको उजुरी नआएको विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन्। यसअघि पनि चोरी भएको सूचना आउने गरेको तर आधिकारीकरुपमा प्रहरीसम्म त्यस्तो सूचना नआएको उच्च प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिए।
‘यसअघि पनि २/४ वटा कम्पनीका हेलिकप्टरबाट इन्धन चोरी भएको सुनिएको हो। यसपटक पनि चोरी भएको भन्ने हामिले सुनेका छौ। तर हामिकहाँ उजुरी आएको छैन। त्यसैले अनुसन्धान गर्न पाएकै छैनौं’ एक प्रहरी अधिकारीले भने।सेतोपाटी